Kismaayo News » Damaashaadka Culimada, Goobweyn ayay ka shidantahay
Kn: Qaar kamid ah culimada uga caansan Soomaalida oo maalmahan muxaadarooyin wacyigalin ah ka waday masaajidda magaalo xeebeedka Kismaayo ayaa u dalxiistagay deegaanka loo bogay ee ildoogsiga ku haboon, waa Goobweyn oo ah halka wabiga Jubba uu kaga daro badweynta Hindiya.
Culimada ayaa waxaa dalxiiska ku weheliyay masuuliyiin Jubbaland oo ay kamid ahaayeen wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Jire Qalinle, wasiirka amniga Cabdirashiid Xasan Nuur iyo wasiirka gaadiidka Maxamed Cabdi Maxamed.
Goobweyn oo ah deegaan aad u qurxoon oo kadin barwaaqeed ah ayay culimadu soo qaateen neecawda udugga leh ee isku dhaca biyaha maayada xeebta iyo kuwa dhoobaysan ee wabiga Jubba. Waa hubaal qof kasta oo halkaasi gaara inuu ubogayo isla mar ahaantaana la qiiroonayo barwaaqada Eebe ku manaystay dalkeena ee hadana dadkiisu ka gaajaysanyihiin.
Culimada oo kaliya ma aha dadka Goobweyn u dalxiis tagay ee sidoo kale madaxweyneyaashii dalka soo maray kuwii ugu danbeeyay, ra’iisul wasaareyaal dhawr ah, wasiiro, xildhibaano iyo inbadan oo kamid ah bulshada rayadka ayaa nafta ku soo qaboojiyay bidhaan aragga Goobweyn.
Waxaan dhihi karnaa ‘Goobweyn way ka shidantahay’ maadaama ay u muuqato inuusan ansax ahayn socdaal aad ku tagto Kismaayo oo aadan soo arag Goobweyn.